Ma Ka Sheeganeysaa Caajis Iyo Wahsi , 8-daan Arin Ayaad Kaga Taqalusi Kartaa | Puntland News
Home Arimaha Bulshada Ma Ka Sheeganeysaa Caajis Iyo Wahsi , 8-daan Arin Ayaad Kaga Taqalusi Kartaa
Caajis badan iyo boring ma dareenta? Ma iska wayday xiisihi aad hawlaha ku qaban jirtay? Waxyaabihi aad jaclayd xiisahay lahaayeen ma ka wayday? Sideed dareenka iskaga biin lahayd? Sii akhri si aad uga faaidaysato:
Ugu horeyn , aqriso mar waliba ducada caajiska ee ah Ilaahoow waxaan kaa nabad galayaa caajiska iyo wahsiga, waxa ayna Puntlandi.ca qodobo hoose ku soo koobeysaa dhinacyo ka caawin kara in aad ka taqalusto arintaas
1. Qabo wax ka duwan waxyaabahad qaban jirtay: markaad wax ku celcelisid xiisuhu doonto ha yeeshe marka u danbaysa waad ka xiiso jabi doonta. Ku dadaal inaad kala gadgadiso waxyaabahad qabatid. Wadada aad mari jirtay bedel, dad cusub la kulan, asxaabti inbadan isarag la kulan, buug cusub akhri.
2. Is xasuusi hadafkaaga: imisa hawlood ayaad ka niyad jabtay? Marku ku galo dareen noocas ah islamarkiiba is xasuusi hadafkaaga. Marnaba ha ilaabin sababta hawsha u bilowday, is xasuusi muhiimada hawshu leedahay ka dibna ka fikir sidii aad qaab cusub ugu wadi lahayd.
3.vCadceeda u bax: inkasto ay jirto dhibaatoyn badan marka cadceeda la socsocdo laakin markaad inyar aad cadceeda u baxdid wuxu leeyahay faaidoyn badan ka mid ah inu dareenkaaga bedelo, habeenka hurdo wanaagsan qaadatid, dhiig-karka hoos u dajiyo.
4. Nasasho qaado: markaad inbadan shaqaysid maskaxduna daasho waxa lagamamaarmaan ah inaad nasasho qaadatid si aanad caajis u dareenmin. Markaad nasasho qaadatid waxaad helaysa energy cusub aad ku shaqayn lahayd.
5. Is dhiiri gali: akhriso maqaalkan si aad isku dhiiri galisid.
6. Jimicso: markaad inyar jimicsatid isla markiiba waxaad dareenmaysa furfurnaan iyo farxad., dhiiga ku furfurmaya.
7. Faaidoynka hawshad wadid is xasuusi.
Sidoo kale daawo muuqaalkaan hoose waxa uu ka caawinayaa in aad ka taqalusto caajiska iyo wahsiga, fadlan haddii aad ka hesho ha bakhiilin in aad u sii gudbiso asxaabtaada